के इजरायलबारे साउदी अरबको धारणा बदलिएको हो ? इजरायली नागरिकलाई आफ्नो भूमिमा शान्तिपूर्वक बस्ने पूर्ण हक रहेको साउदी राजकुमारको भनाई :: a1nepal.com.np
के इजरायलबारे साउदी अरबको धारणा बदलिएको हो ? इजरायली नागरिकलाई आफ्नो भूमिमा शान्तिपूर्वक बस्ने पूर्ण हक रहेको साउदी राजकुमारको भनाई
‘इजरायली नागरिकलाई आफ्नो भूमिमा शान्तिपूर्वक बस्ने पूर्ण हक छ ।’ साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान अल सउदको यस भनाइलाई साउदी अरब र इजरायलबीच बढ्दो निकटताको बलियो प्रमाणका रूपमा हेरिँदै छ । अमेरिकी म्यागेजिन ‘द एट्लान्टिक’लाई दिएको साउदी युवराज बिन सलमानको यो अन्तर्वार्ता सोमबार प्रकाशित भएको छ ।
आफ्नो अन्तर्वार्तामा युवराज सलमानसित सोधिएको थियो— के उनी यस विषयमा यकिन गर्छन् कि यहुदी नागरिकको आफ्नो राष्ट्र र कमसेकम आफ्नो पितृभूमिको एक हिस्सामाथि हक छ ?’ यस प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्— मेरो विचारमा प्यालेस्टाइन र इजरायली जनतालाई आ–आफ्नो जमिनको हक छ । तर, हामीलाई एउटा यस्तो शान्ति सम्झौताको पनि आवश्यकता छ, जसका आधारमा हरजोकोहीका लागि शान्ति र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकियोस् । र, सम्पूर्ण सम्बन्ध सामान्य बनिरहोस् ।
१९६७ को मध्यपूर्व युद्ध
साउदी अरबले अझै पनि इजरायललाई मान्यता दिएको छैन । सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धमा इजरायलको कब्जामा आएका अरब इलाकाबाट उसको फिर्ती साउदी अरबको एउटा मुख्य मुद्दा रहँदै आएको छ । वर्षौंसम्म साउदी अरबले यही भन्दै आयो कि द्विपक्षीय सम्बन्धमा सामान्यीकरण यी क्षेत्रबाट इजरायलको फिर्तीमा निर्भर रहनेछ ।
साउदी अरबले अझै पनि इजरायललाई मान्यता दिएको छैन । सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धमा इजरायलको कब्जामा आएका अरब इलाकाबाट उसको फिर्ती साउदी अरबको एउटा मुख्य मुद्दा रहँदै आएको छ ।
तर, साउदी युवराज बिन सलमान भन्छन्— हामी जेरुसेलमको पवित्र मस्जिद र प्यालेस्टाइन नागरिकको सुरक्षालाई लिएर बढी नै चिन्तित छौँ । हाम्रो मुख्य मुद्दा नै यही हो । हामीलाई अन्य मानिससित कुनै समस्या छैन । साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान अल सउद यतिखेर आफ्नो व्यापारिक कारोबार वृद्धि गर्न तथा इरानको असरसित जुध्नका लागि अमेरिका भ्रमणमा छन् ।
इजरायल–साउदी अरब सम्बन्ध
इरान र साउदी अरबबीच जे–जसरी तनाव बढिरहेको छ, सोही कारणबाट इजरायल र गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिलबीच साझा हितको चासो बढेको छ । किनकि, दुवैले इरानलाई एक खतराका रूपमा हेरिरहेका छन् ।
साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानले भनेका छन्— इजरायलका साथमा हाम्रा कैयौँ साझा हितका मुद्दा छन् । यदि शान्ति कायम रह्यो भने मात्र गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिलका देश र इजरायलबीच आपसी हितका विषय अघि बढ्नेछन् । पछिल्लो महिनामा मात्र साउदी अरबले आफ्नो आकाशबाट इजरायलका लागि कमर्सियल उडान सेवालाई स्वीकृति दिएको थियो ।
प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी भएको फेसबुकद्वारा स्वीकारोक्ती, के भएको घटनामा .. सैन्य शक्तिमा अमेरिका पहिलो, चिन र भारत क्रमश तेस्रो र चौथो, इजरायल १५औं र नेपाल ९७औं स्थानमा साउदी सेनामा महिला भर्ना खुला इजरायली प्रधानमन्त्री वेन्जामिन नतान्याहु र प्रहरीबिच टस्सल उडान भरेको ५ मिनेटमै ७१ यात्रुसहितकाे रूसी विमान दुर्घटना उत्तर कोरियाले आणविक आक्रमण गर्दै , प्रतिकार गर्दा पनि निकै खतरनाक ! अफगानिस्तानको काबुलमा यस वर्षकै ठूलो हमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्स इजरायली संसदमा बोलिरहदा अरव सांसदको अवरोध अमेरिकाद्वारा प्यालेस्टिनीहरूलाई गर्दै आएको सहयोग कटौती सन् २०१७ को विश्व राजनीति : हाइड्रोजन बमदेखि जेरुसेलमसम्म
← कालो हरिण सिकारको आरोपमा सलमान खान दोषी ठहर, ५ वर्षको जेल सजाय	रगत चेकजाँच गरेरमात्र विवाह गर्न एड्स संक्रमितको सुझाव →